Ihe egwu di iche iche dijitalụ na otu Facebook nwere ike isi kwụsị
23B April 2021
Ebe E Si Nweta: Pledgetimes.com
Nhazi onwe site na ntanetị dijitalụ kachasị elu. Ihe agwụbeghị bụ arụmụka ọgba aghara banyere otu anyị nwere ike isi na-achịkwa ịntanetị.
Facebook na ndị ọzọ abụrụla ndị ọchịchị na-agbagha usoro ọchịchị onye kwuo uche ya ma na-ahapụ ụwa ya n'ọgba aghara.
Ọ bụ ezie na ndị na-eme iwu iwu n'ụwa niile ọkachasị ndị nọ na Europe na US nwere nnukwu nchegbu gbasara nha na mmetụta nke ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka teknụzụ, anyị abanyela oge a na-ejighị n'aka banyere ọdịnihu nke nyiwe yana otu anyị nwere ike isi mee ka ha na mmekọrịta dị mkpa maka ahụike dijitalụ na ịdị ngwa ọkụ. nke ijide ọgba aghara na-elekọta mmadụ.
Na-atụgharị uche na Nick Clegg na-egbukepụ egbukepụ na gị na algọridim: Ọ na-ewe Abụọ na Tango ', ọ rụrụ ụka na ọbịbịa iwu EU banyere omume nke nyiwe dijitalụ ekwesịghị iduga ya ịchụpụ nwa ahụ na mmiri ịsa ahụ.
Ka m were tugharia ya aka na nti: “Gbanwee ee; “Na-amachibido” ezi uche nke iji data mba. Ọ ga-amasị m ịhụ Google ọzọ ma ọ bụ Alibaba na-apụta na Europe.
Mana ọ gaghị eme ma ọ bụrụ na Europe gbanwee imegide iji ihe eji eme ihe na ihe okike. Nke a dị mkpa maka ọdịnihu nke ndị na-emepụta ụgbọ ala German, ụlọ ahịa Dutch, ụgbọ elu ndị France, na ọtụtụ nde obere azụmaahịa dịka ọ dịịrị nnukwu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. ”
Nsogbu ya na soshal midia
Mgbasa mgbasa ozi ma ọ bụ kpọọ ha usoro ntanetị dijitalụ agbanweela ụwa anyị. Dika obu taata ihe nlere anya ya di uku dika ha enwegh ike ikwu okwu banyere ike algorithm ha iji me ka ihe di egwu buru ibu, tinye uwa oku na uzo ebighi ebi.
Akọwawo usoro ntanetị dijitalụ ndị a dịka Doomsday Machines, ime ụlọ nchịkwa dijitalụ yana kwa nnukwu usoro nyocha nke na-akwadebe ndị nwe ya ịgbanwe omume, echiche na ọchịchọ ndị mmadụ.
N'ikwu ya n'ụzọ doro anya, anyị enweghị ike ịrụ ụka megide eziokwu ahụ bụ na algọridim na-emegharị ndị mmadụ dịka Maazị Nick Clegg ka ọ gbalịrị ime site na-ekwenyeghi na usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-anọpụ iche ma na-ekwupụta n'ụzọ doro anya ọchịchọ anyị bu pụta ụwa maka ihe jọgburu onwe ya ma ọ bụ naanị nnọchite anya nke onye anyị bụ .
Ọzọkwa, anyị enweghị ike ịgọpụ ihe ngọpụ na ụmụ mmadụ bụ ndị na-adịghị ike, ndị na-enweghị ike ọ bụla, napụrụ ikike nnwere onwe ha ime ka ihe ziri ezi nke ọdịnaya mebiri emebi nke ịdị adị mmadụ kwenye.
Anyị abụghị egwuregwu nke usoro algorithmic na-arụ ọrụ kama ọ bụ agbụrụ nke nweela ọganihu dị ukwuu site na ị na-elekọta ọdịnihu anyị, na-agbanwe ihe ọhụrụ na ụkpụrụ evolushọn na ọganihu nke ụkpụrụ.
N'ụzọ dị mwute, anyị amalitela afọ iri ọhụrụ a na usoro iwu ntụkwasị obi na-akwado ịtụkwasị nyiwe dijitalụ ndị a kachasị anya.
Site na usoro usoro iwu na nke iwu kwadoro, ụwa anyị nwere ike ịgba mgba n'ọgba aghara maka afọ iri na-abịanụ tupu iwu ịtụkwasị ntụkwasị obi amalite.
Ka ọ na-erule mgbe ahụ, nyiwe dijitalụ kachasị nke taa nwere ike ịdaba na sistemụ siri ike karị na-esite na ya mechie ihe ọ bụla uru iwu taa na-atụkwasị obi na US nwere ike ịnwa imezu.
Nke a bụ n'ihi na, ihe na-egwuri egwu na nyiwe dijitalụ kachasị bụ oke ihe ọmụma ụlọ ọrụ, gbanye ma na-akụda akụ na ụba akụ na ụba nke obere ọdọ mmiri na-akwado, na-etinye ụfọdụ ihe ọmụma tacit na onye mmeri ga - eme ka ihe siri ike maka mmalite teknụzụ mebie ọbụlagodi mgbe iwu omume ọhụrụ na-abịa EU.
Anyị enwere ike ịsọ mpi megide nghọta dị ike nke na-achịkwa nyiwe dijitalụ nwere banyere anyị? Mgbasa mgbasa ozi abụghị ihe ọjọọ anyị nwere ike ịhapụ na echiche ya na isi ya.
Mana anyị nwere ike ịkwụsị Facebook na ihe ọ masịrị ya site n'ime ka ha bụrụ ọrụ ọha na eze. Ndị a dijitalụ nyiwe dijitalụ enweghị ike iwepụ ma ọ bụ pụọ n'otu ntabi anya.
Anyị ga midwife usoro nke inye aka na ntanetị dijitalụ ka ọ bụrụ ọrụ ọha na eze na-ejere anyị ozi, na-enyere anyị aka ikwupụta ọhụụ ọhụụ ebe nyiwe na-arụ ọrụ maka ọdịmma anyị.
Nke bụ eziokwu bụ na dijitalụ kachasị nyiwe dị ka iMessage, Signal, Telegram, WhatsApp ọdụ ihe ọjọọ ma na-akọwa ọdịnaya na ngwa izipu ozi nkeonwe.
Kedu otu nyiwe si agwu ga - abu otu ha si esi puta ichota ikike nke algọridim ha na egwuru egwu di egwu nke ndi mmadu na - eme ka mmalite nke usoro dijitalụ a.
Maka nyiwe dijitalụ iji lanarị, ha ga-abụ ọrụ ọha na eze na-ejikwa puku ijeri mmadụ na mkparịta ụka maka ọdịmma nke ọha mmadụ.
Ihe egwu PR na Fragility nke mba na-emepe emepe
Maka mba ndị na etolite etolite ịmụrụ ihe ndị otu onye kwuo uche ha ma bụrụ ndị ụkpụrụ China na-anwa ọnwụnwa; ihe omuma gha adighi nma na mmekorita nke mba ndia.
Ha enweghi ikike nke Western World ma obu ikike teknụzụ ijikwa mmebi mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịka o siri bụrụ nke mgbasa ozi mmekọrịta.
Ha ga-achọ ngwaọrụ ọhụrụ na mgbanwe ọdịdị dị iche iche iji lebara ihe egwu nke ịgha ụgha na mkpa ijide ụlọ ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta.
Ọnọdụ ọ bụla anyị mere n'okwu ndị a, ka anyị hiwere n'abalị, anyị niile kwesịrị icheta ikike dị na ijikwa ọdịda ọha na eze site na nyiwe dijitalụ na ụwa niile nakwa na nyiwe dijitalụ ndị a kachasị oke nwere ọdịnaya ya anaghị emebi ọchịchị onye kwuo uche ya. ka bụ “ihe iyi egwu kasịnụ” maka ịdị adị n'otu anyị.
Na ihe niile, ụwa anyị enweghị ike ịnabata usoro mkpa Facebook maka nkewa maka ichedo okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ntuli aka.
Igwe okwu dijitalụ kachasị dị mkpa kwesịrị ịghọta na mgbe nsogbu ọha na eze enwetaghị nlebara anya dị mkpa n'ihi nsogbu ndị a na-ewereghị na ha nwere nsogbu nke PR, ọ gaghị agbanwe eziokwu ahụ na ọ na-eme ka ụwa anyị ghara ịdị mma maka anyị niile .
Iguzogide omume na-ezighi ezi ebe obula n ’uwa bu izoputa anyi nile na aka anyi. Anyị nwere ike ọ gaghị achọ EU, US ma ọ bụ ọbụlagodi usoro iwu China, ihe anyị chọrọ ugbu a bụ ụkpụrụ zuru ụwa ọnụ na iwu ụkpụrụ omume nke na-ezute ụwa sara mbara na mkpa dị mkpa maka ịdị ọcha nke dijitalụ.
Siza Keluro, Co-guzobere / CEO, Nanocentric Technologies Limited. Ọ na - eduzi 'Mee Na West Africa', mpaghara mpaghara Think-tank.